INGXELO YOBOMI - Zhongshan Joineonlux Co., LTD.
I-Zhongshan Joineonlux Co., LTD yasekwa ngo-2003. Kwiminyaka eli-17, iJoineonlux idale ukukhula okukhulu ngokujonga kakhulu kwimveliso yenkqubo yemveliso. I-Joineonlux emva kweminyaka yemizamo engapheliyo kunye nokunyamezela, ikhule yaba yitalente ephezulu kunye namandla emveliso kwihlabathi, u-Joineonlux unokuhlala ethe nca kwinzululwazi kunye nobuchwepheshe kunye nefilosofi yeshishini elinoxanduva, inkampani yethu ibisenza igalelo ekudambiseni ubushushu behlabathi ngokudibanisa Itekhnoloji ye-LED yamva nje kwiimveliso zokukhanyisa ezifanelekileyo kunye nezisombululo, kwangaxeshanye, Siyimveliso kunye nentengiso njengenye yeshishini le-hightech yesizwe.
Uyidlulisile i-CE, i-RoHS, i-TUV ... njl njl. Kunye nezinye izatifikethi zasekhaya nezamazwe aphesheya, kwaye waphumelela inkqubo yokuqinisekiswa kwe-ISO9001, hayi kuphela ukuba neklasi yokuqala i-automation yeqela le-R & D, izixhobo ezizisebenzelayo kunye namalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, kodwa Ukukhanya kwe-LED ukukhanya qulity iyunithi esemgangathweni yoyilo lwesizwe, amashishini aphezulu esizwe.
Kukho abasebenzi abangaphezulu kwe-100, kubandakanya nabaphathi abangama-20 abafundileyo. Sigxile ekuphandeni nasekuphuhliseni, ekuthengiseni. Kukho oomatshini abaphambili be-SMT abayi-9, oomatshini bokuncamathisela abangama-9, ii-extruders ezi-6, oomatshini abali-7 be-soldering. Umthamo wemveliso ungaphezulu kwe-2.000,000 yeemitha ngenyanga. Senza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukoneliseka kwabathengi ngokufumana kunye nokuhambisa ezona mveliso zisemgangathweni ngexabiso lokhuphiswano. Iqela lethu lilapha ukuze likhonze kwaye lijolise ekuboneleleni ngeyona nkonzo.
Injongo yethu yokwenza ixabiso kubathengi, siya kuzama konke okusemandleni ethu ukuphumeza imeko yokuphumelela, ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi, njengegcisa lokuqala elikhokele umenzi wokukhanyisa imitya, ngaphezulu kweminyaka eli-17, uJoineonlux kudala ukukhula okukhulu kwisiseko senkqubo yemveliso. Ngemizamo engagungqiyo, siye savelisa italente ephezulu kunye namandla emveliso kumzi-mveliso wehlabathi, Samkela abathengi behlabathi lonke ukuba banxibelelane nathi kuthethathethwano lweshishini.